हिमाल खबरपत्रिका | ‘सरकारले डीपीएल गरेको दिन सपना पूरा हुनेछ’
२५ चैत २०७४ - १ वैशाख २०७५ | 8-14 April 2075
‘सरकारले डीपीएल गरेको दिन सपना पूरा हुनेछ’
१७ चैतदेखि धनगढीमा शुरू भएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष सुवास शाही भन्छन्, “फ्लडलाइटमार्फत डे–नाइट टुर्नामेन्ट गर्ने, होम एण्ड अवेका आधारमा प्रतियोगिता गराउने अबको योजना छ।”
विश्व क्रिकेटमा नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएकै वेला डीपीएल दोस्रो संस्करण गराइरहनुभएको छ । कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
दैनिक तीन हजारजति दर्शक आइरहनुभएको छ । धनगढी ‘सिटी अफ क्रिकेट’ का नामले चिनिएको छ । हामी एकदमै उत्साही छौं ।
अघिल्लो डीपीएलभन्दा यसपटकको प्रतियोगिता के कति कारणले फरक र महत्वपूर्ण छ ?
ई–टिकटदेखि डिजिटल स्कोरबोर्ड, थर्ड–अम्पायर र मैदानमै रिप्लेको व्यवस्था गरेका छौं । पुरस्कार राशि पनि बढाएका छौं । गएको वर्ष रु.१ करोड ८० लाख खर्च भएको थियो, यसपटक रु.३ करोड खर्च हुने अनुमान छ । प्रतियोगिताले आईसीसीको मान्यता पाएको छ । लाइभ स्ट्रिमिङ र ईएसपीएनक्रिकइन्फोबाट लाइभ अपडेट हुनथालेपछि धनगढीको कनेक्टिभिटी विश्वसँग भएको छ ।
युएई, हङकङका कप्तान पनि डीपीएलमा खेलिरहेका छन् । यस्तो कसरी सम्भव भयो ?
दुई कप्तानसँगै भारतमा आईपीएल र रणजी ट्रफी खेलेकाहरु पनि आएका छन् । प्रत्येक वर्ष केही नयाँ गर्ने सोच अनुसार विदेशी खेलाडी सहभागी गराएका हौं । यसबाट हाम्रा खेलाडीले सिक्न पाएका छन्, दर्शकमा बेग्लै माहोल सिर्जना गरेको छ ।
नेपाली क्रिकेटले फड्को मारे पनि यतिवेला क्यान निलम्बनमा छ, पूर्वाधार निर्माण निराशाजनक छ । भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपाली क्रिकेटको भविष्य एकदमै उज्यालो छ । तर, यो नितान्त सरकारी चाहनामा भर पर्छ । किनभने सरकारसँग असीमित स्रोत छ । हामी यति गर्न सक्छौं भने सरकारले नसक्ने के होला र ∕
डीपीएललाई लिएर बाँकी सपना के के छन् ?
फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणमा सरकारलाई दबाब दिन डीपीएल शुरु गरेका थियौं । अहिले आफैं मैदान बनाउन सक्ने विश्वास पलाएको छ । लगानीका लागि निजी क्षेत्र तयार छ, सरकारले जटिलता मात्र फुकाइदिनुपर्‍यो । डीपीएलजस्ता प्रतियोगिता सरकार आफैंले गरेको दिन हाम्रो सपना पूरा हुनेछ ।